Ingaba isebenza njani inkqubo yokuqokelelwa kwerhafu yokuhlala neyokubhatalwa kwayo ngu-Airbnb? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ukuqokelelwa nokuthunyelwa kwerhafu yokuhlala – isihloko soncedo
Ingaba isebenza njani inkqubo yokuqokelelwa kwerhafu yokuhlala neyokubhatalwa kwayo ngu-Airbnb?
Kusebenza njani ukuqokelela nokubhatala kwerhafu yendawo yokuhlala?
Ngokuqhelekileyo ababuki zindwendwe kufuneka bayiqokelele ngokwabo irhafu yendawo yokuhlala ngaphandle kokuba ukuqokelelwa nokubhatalwa kwer…
Irhafu isebenza njani kubabuki zindwendwe?
Imithetho yerhafu inokuba neenkcukacha ezininzi ize yahluke kwingingqi nganye. Sinenkcazelo enokukunceda.
Yintoni i-VAT ibe ndingena ndawoni mna kuyo?
I-Value Added Tax okanye iVAT yirhafu eyongezelelwa kwimali yokuthenga izinto neenkonzo. UAirbnb ufaka iVAT kwimali ebhatalwa ngabantu abase…